Macluumaadka Shirkadda - Shenzhen ChiLink IoT Technology Co., Ltd.
ChiLink wuxuu ka yimid Shiinaha, Link adduunka.
Sameyso ganacsi leh daacadnimo
Hal-abuurnimo iyo horumar
Shenzhen ChiLink IoT Technology Co., Ltd.waa shirkad IoT ah oo loogu talagalay inay bixiso alaabada isgaarsiinta shabakadda wireless-ka iyo xalka. ChiLink IoT Technology wuxuu isku darayaa horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka, iibka, adeegyada farsamada iyo horumarka la habeeyay. Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay siisay alaabooyin taxane ah M2M iyo xalal ku saleysan isgaarsiinta moobiilka ee dhammaan qaybaha nolosha.
Alaabooyinka waxaa ka mid ah serverka dekedda taxan, moduleka LoRa, module wifi, moduleka meelaynta GPS, moduleka meeleynta Beidou, modem-ka 3G / 4G modem, GPRS DTU, 3G / 4G DTU, router wireless-warshadeed 3G / 4G, wifi baabuur, xamuul nool dheellitirka router, kumbuyuutar 4G warshadeed, M2M madal daruur iyo qalab kale iyo softiweer.
Waxay daboolaysaa awoodda caqliga, gaadiidka casriga ah, ka hortagga dabka, guriga caqliga badan, dhowrista biyaha caqliga badan, daryeelka caafimaad ee xariifka ah, qaanadaha wax lagu qoro, tuulista lacag bixinta, boosteejooyinka iskaa wax u qabso ah, amniga guud, isgaarsiinta amniga, kormeerka warshadaha, ilaalinta deegaanka, la socodka deegaanka, waddada nalalka, beerashada ubaxa, iyo gawaarida saaran Wifi iyo beeraha kale.
ChiLink wuxuu leeyahay koox xirfadlayaal ah R & D oo ah alaabada isgaarsiinta shabakadaha warshadaha, oo ka kooban injineero elektaroonig ah, injineero softiweer iyo injineerro shabakadeed leh khibrad qani ku ah dalabka nidaamka. Waxay qaadataa habka horumarinta iyo heerarka wax soo saarka warshadaha. Tikniyoolajiyadda caalamiga ah ee hoggaamineysa, hal-abuurnimo isdaba-joog ah, raacdo heer sare ah, ayaa soo saartay taxane ah is-gaarsiinta is-gaarsiinta warshadaha oo xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, waxayna heshay tiro ikhtiraac iyo shatiyadaha.